IMars kuMntu oMhlaza: Mazi ngcono - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana IMars kuMntu oMhlaza: Mazi ngcono
IMars kuMntu oMhlaza: Mazi ngcono
Inyanga kwiCancer man yindoda ethantamisayo ekhetha ukusebenzisa uvakalelo kunye nothando ukoyisa umntu wayo okhethekileyo.
Kokubini ukuzimisela kwakhe ukwenza ezinye izinto, amabhongo, unyamezelo, kunye nokunxanelwa kwakhe ngokwesondo kuchaphazeleka kukuhla nokunyuka.
I-Mars kwiCancer man ngokufutshane:
Iimpawu: Ukukhusela kunye nothando
Izinto ezingalunganga: Ngokugqithisileyo-ngokweemvakalelo nangokungazithembi
Umphefumlo womphefumlo: Umntu onomonde kuye
Isifundo sobomi: Ukuncamathela kwesiqhelo ixesha elide.
Akayi ngqo, kodwa kunokuba ibe yinto engacacanga, engalindelekanga kwaye efihliweyo, ke musa ukuphosa izicwangciso zakho ngefestile ngenxa yokuba engabonisi uthando lwakhe ngendlela ecacileyo.
Ezinye izinto zithathwa ngokugqithisileyo
Baninzi kakhulu aba bantu kwihlabathi liphela, kwaye bonke banovakalelo, bayathandana, ngumfazi onobuntu, ukuthetha inyani. Uya kufuna ukuba iqabane lakhe limtotobise, limthande kwaye limkhathalele kuzo zonke iinkalo.
Ewe akunjalo ukuba banokufumana omnye umfazi kwimizuzwana embalwa, kuba abanako, kwaye kunzima kakhulu ukuhlala wedwa ixesha elide.
Xa ulungile, ulunge kakhulu, ngengqondo yokuba akukho namnye unjengaye, onothando, onothando novelwano.
Le nzalelwane iya kufuna ukuchukumisa iqabane layo, ukumenza ukuba alithande ngokungathandabuzekiyo, ngaphandle kwezithintelo kunye nobomi bakhe bonke. Ngale ndlela, uyayithatha inyathelo ngenyathelo kwaye usebenzisa zonke izixhobo kwizixhobo zakhe.
Ithetha ntoni le nto? Uza kuziphatha njengomhlobo osenyongweni, njengoyena mntu uthandana kakhulu emhlabeni, kwaye oku kungamzisa kwindawo yomhlobo owothusayo.
Ngaba indoda gemini inokuthembeka
Ngandlela zonke, bafuna ukumamela nokukhusela abo babathandayo, nokuba babenzele izinto ezincinci kunye neenkonzo okanye ngokuchasene nabo banokubenzakalisa.
Une-ethe-ethe kakhulu kwaye unemvakalelo, kwaye oku ngamanye amaxesha kunokuqondwa kwaye uzive ngathi sisiphene, esibi ngokwenene ukuba sithathwa sigqithise.
Umhlaza wendoda kunye nowesifazana ongumfazi
Kwaye ngale ndawo yemveli, ithathwa kakhulu. Akaqinisekanga ngesiqu sakhe, akanakho ukuzithemba, ukuzithemba, ubunzima bokujongela phantsi, okanye usenokuba nje woyika kakhulu ukwenza uphawu kwihlabathi ngokwakhe.
Oku kuyacaphukisa kuba uninzi lwabasetyhini lukhangele ngqo ngokuchaseneyo, umntu okhaliphileyo, onesibindi, othembekileyo, umntu abanokumthemba kwezona meko zinzima.
Endaweni yokuba alindele ukuba isithandwa sakhe simkhathalele njengonina, ukusukela kwinto encinci ukuya kuxanduva olukhulu.
Abemi abanoMars kuMhlaza abathumela ezo ntlaselo zokulwa nabalweli ezantsi kubo banemvakalelo, bayile, kwaye baneetalente ezininzi zobugcisa.
Banokucula, banokudanisa, banokude babe nkulu kule mimandla ukuba babeke amabhongo abo ekusebenzeni. Ukuya kude kwisitayile sabo sobuqu, ngokwesiko yindlela eya kuyo. Abathandi ukuzikhwebula kumgangatho otofotofo nolungisiweyo.
Ngapha koko, ubuso bakhe obunomsindo bunezinto ezininzi, njengothixo waseRoma uJanus. Oku kwenzeka kuba uzenzekela kwaye unyanzelekile xa izinto zifika kwimithambo yakhe.
Xa bengadubuli ngaphandle ngokudubuleka ngumsindo, baya kubuyela emagumbini abo babize oomama babo, okanye bakhale ekoneni, balinde ummangaliso wokusombulula iingxaki zabo.
Inomdla wokukhathalela abantu abathandayo
Ngokwezothando, indoda ezelwe ineMars kuCancer ayithandi ukubetha ijikeleze ityholo kwaye iyakufika ngqo kwindawo apho ivuma khona uthando lwayo olungapheliyo, ngendlela enesidima, yothando kunye nembeko egqithisileyo.
umfazi we-sagittarius kunye ne-capricorn man
Akasoze akubonise ukuba ungubani kanye kanye, ubuncinci hayi kwasekuqaleni kuba ungaphezulu kohlobo lomfana olungenisiweyo.
Akazukutyhila zonke iimvakalelo zakhe ukusuka nokuhamba, kwaye nokuba uza kulila ingcuka amaxesha amaninzi, kwaye azigalele kabuhlungu, ukwanoxanduva kakhulu kwaye uzimisele malunga nokunyamekela abathandekayo bakhe.
Ulijoni ngokusisiseko, unyanzelekile ukuba athathe izixhobo, kodwa esejoni. Uthatha wonke umntu amthandayo phantsi kokhuseleko, phantsi kwamaphiko akhe.
Unamathela ebantwini ngokukhawuleza kwaye akanakukuyeka oku nokuba uyafuna. Ngomphefumlo onothando nothando, angabinakho ukunamathela ngokungenathemba ebantwini?
Nantoni na efumana ingqalelo yakhe, kwaye nantoni na agxila kuyo ixesha elide, uya kuyikhusela ngobomi bakhe, kwaye akasayi kuvumela nabani na ongomnye ukuba ahlasele ukhetho lwakhe.
Nanini na xa enomsindo, ukhetha ukuwukhuphela kuye umsindo wakhe, kwaye ashiye nje indawo, endaweni yokuza kubethana nabachasi bakhe. Ngokusisiseko uzama ukunqanda ubundlobongela, kodwa usenzakalisa omnye ngokubonakala ekude kwaye engenamdla. Ngapha koko, ubona isini njengenye into ngaphandle kweendlela zokufikelela.
Ukuseka usapho, ukukhathalela iqabane lakhe, ukumkhusela, ukuthatha inyathelo lokuqala lokwenza izicwangciso kunye, ngaloo ndlela kuzalisekiswa umlinganiso weemvakalelo zakhe, ezi ziindlela uMars kwiCancer man afumana ukonwaba ngazo.
I-Mars kwiCancer man, ekubeni ibuthathaka kwaye inemvakalelo njengoko injalo, intuition iqhubele phambili kakhulu, ukuya kwinqanaba elimnika kufutshane ne-omniscience ukuya kufunda ngokubandayo.
Uyayazi into ayifunayo ebomini kwaye unomdla wokunyamezela ukuyibona yonke yenziwe phambi kwamehlo akhe. Unomonde kwaye uthintelwe ngexesha lakhe lokuphazamiseka, lo mthonyama uyaqonda ukuba ekuphela kwendlela anokufumana ngayo ulonwabo kukuzama ukodlula imeko yakhe yeemvakalelo.
Unokufumana ukunamathela kunye nothando kunye neqabane lakhe, ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba baya kufuna ukumanga nokumanga umzuzu ngamnye wosuku.
Uziva ekhuselekile kwaye ekhuselekile xa esezandleni zomntu amthandayo. Elona xesha kuphela xa eziva ngathi kulawulo kuxa usondela kubo bonke, usenza uthando oluphosakeleyo.
ngowuphi umqondiso ngoSeptemba 8
Ukhetha ukwenza izinto ngale ndlela, ngakumbi xa kufikwa kumba wokuhombisa kunye nokulungisa indlu yakhe.
Uye wamisela ukuphikisana nesithandwa sakhe ukuba uzama ukucebisa ngezinye iindlela zokwenza oku, kwaye ungquzulwano lwenzeka rhoqo kubudlelwane bakhe. Ukwanobuchule kakhulu kubuchwephesha obutsha.
Ngapha koko, funda ukuqonda ukuba uyazityhila kuwe ngendlela angazange enze ngayo ngaphambili, kwaye oku luphawu lokuba uqala ukusondela, ukukuthemba.
Musa ukulimaza ulindelo kunye nentliziyo yakhe ngokumdanisa, ngokuhlekisa ngobuthathaka bakhe ngokweemvakalelo.
NgoSeptemba 26 Imihla yokuzalwa
Indoda yaseGemini kunye neAquarius Umfazi ukuhambelana kwexesha elide
uphawu lwe-zodiac lwango-Agasti 25
Uphawu lwe zodiac ngomatshi we-4 wokuzalwa
Indoda ye-scorpio kunye nebhinqa le-scorpio
Uphawu lweZodiac ngo-Okthobha 6